शोकको सामना गर्नुहोस्‌—तपाईँले चाल्नुपर्ने कदम
ब्यूँझनुहोस्! | सङ्ख्या ३ २०१८
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबानाग इलोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गारीफुना गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चेक जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन टेटन डिली डच डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नाभाहो नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फिजियन फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (टोबा) बासा (क्यामरून) बिस्लामा बुल्गेरियन बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा माम्ब्वे-लुंगु मालागासी माल्टिज मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन
शोकमा परेकाहरूका लागि मदत
शोकमा पर्दा के गर्नुपर्छ भन्‍ने विषयमा सल्लाह खोज्नुभयो भने अनगिन्ती सल्लाह पाउन सक्नुहुन्छ। कुनै व्यावहारिक हुन्छ त कुनै हुँदैन। अघिल्लो लेखमा छलफल गरिएझैँ सबैको शोक गर्ने तरिका फरक-फरक हुन्छ। त्यसैले कुनै सल्लाह कसैको लागि मदतकारी हुन सक्छ भने अरूको लागि नहुन सक्छ।
तैपनि थुप्रै मानिसले लाभ उठाउन सकेका केही भरपर्दा सल्लाहहरू छन्‌। प्रायजसो यस्ता सल्लाहहरू मनोवैज्ञानिकहरूले शोकमा परेका व्यक्‍तिहरूलाई दिने गर्छन्‌। यी सल्लाहहरू पुरानो किताब बाइबलको सिद्धान्तहरूसित मेल खान्छ। बुद्धिका कुराले भरिएको यस किताबले दिएका सल्लाहहरू आज पनि उत्तिकै व्यावहारिक छन्‌।
१: परिवार र साथीभाइको मदत स्विकार्नुहोस्‌
केही विज्ञका अनुसार शोकमा पर्दा चाल्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम यही हो। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एक्लै बस्न मन पर्ला अनि अरूले मदत गर्न खोज्दा झिजो लाग्ला। यस्तो महसुस गर्नु स्वाभाविकै हो।
तपाईँ हरसमय कसै न कसैसित हुनै पर्छ भनेर नसोच्नुहोस्‌। तर अरूसित सङ्‌गतै गर्न पनि नछोड्‌नुहोस्‌। हुन पनि तपाईँलाई पछि तिनीहरूकै मदत चाहिन सक्छ। अरूले तपाईँको लागि के गरिदिएको चाहनुहुन्छ, दयालु भई बताउनुहोस्‌।
आफ्नो आवश्‍यकतालाई विचार गरेर अरूसित बिताउने समय र एक्लै बस्ने समय छुट्ट्याउनुहोस्‌।
सिद्धान्त: “एकभन्दा दुई असल हो। . . . किनकि यदि एउटा लड्‌यो भने अर्कोले आफ्नो साथीलाई उठाउनेछ।”—उपदेशक ४:९, १०.
२: पोसिलो खानेकुरा खानुहोस्‌ र व्यायाम गर्नुहोस्‌
शोकमा पर्दा हुने तनाव कम गर्न पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ। थरीथरीका फलफूल, सागसब्जी र चिल्लो कम भएको प्रोटिनयुक्‍त खानेकुरा खानुहोस्‌।
प्रशस्त पानी र शरीरलाई फाइदा पुऱ्‍याउने पेय पदार्थ पिउनुहोस्‌।
तपाईँलाई त्यति भोक लाग्दैन भने थोरै-थोरै खानेकुरा बेला-बेलामा खानुहोस्‌। थप पोषणको विषयमा डाक्टरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। *
छिटो-छिटो हिँड्‌दा र व्यायाम गर्दा नकारात्मक भावना हटाउन मदत पाइन्छ। व्यायामले कसै-कसैलाई आफ्नो जीवनमा भएको परिवर्तनबारे विचार गर्न मदत गर्छ भने अरू कसैलाई चाहिँ अचाक्ली चिन्तामा नडुब्न मदत गर्छ।
सिद्धान्त: “कुनै मानिसले आफ्नो शरीरलाई कहिल्यै घृणा गर्दैन बरु त्यसलाई . . . खुवाउँछ अनि स्याहार्छ।”—एफिसी ५:२९.
३: पर्याप्त मात्रामा सुत्नुहोस्‌
निद्रा शरीरको लागि लाभदायी हुन्छ, अझ विशेषगरि शोकाकुल व्यक्‍तिहरूका लागि। किनभने शोकमा पर्दा अत्यधिक थकाइ लाग्छ।
कति मात्रामा क्याफिन र मादक पदार्थ सेवन गर्ने, त्यसमा विचार पुऱ्‍याउनुपर्छ किनभने यी दुवै कुराले निद्रालाई असर गर्छ।
सिद्धान्त: “मरुन्जेल मेहनत गरेर बतासलाई खेद्‌नुभन्दा बरु केही बेर आराम गर्नु नै बेस हो।”—उपदेशक ४:६.
४: पीडा कम गर्ने तरिका पत्ता लगाउनुहोस्‌
शोक गर्ने तरिका व्यक्‍तिपिच्छे फरक हुन्छ भन्‍ने कुरा मनमा राख्नुहोस्‌। त्यसैले के गर्दा तपाईँको पीडा कम हुन्छ, पत्ता लगाउनुपर्छ।
थुप्रै मानिसले आफ्नो पीडा पोखाउँदा हल्का महसुस गर्छन्‌ तर अरू कतिपयलाई चाहिँ आफ्नो पीडा नपोखाउनु नै बेस लाग्छ। आफ्नो पीडा अरूलाई पोखाउँदा राहत मिल्छ भन्‍ने कुरामा विज्ञहरूको पनि आ-आफ्नै धारणा छ। आफ्नो पीडा कसैलाई व्यक्‍त गर्न चाहनुहुन्छ तर त्यसो गर्न गाह्रो लाग्छ भने मिल्ने साथीलाई आफ्नो भावना पोखाउन सक्नुहुन्छ।
कसै-कसैले रुँदा आफ्नो पीडा कम भएको महसुस गर्छन्‌। तर कसै-कसैलाई भने त्यति नरोए पनि पीडा कम गर्न सकेका छन्‌।
सिद्धान्त: “आफ्नो मनको पीडा आफैलाई मात्र थाह हुन्छ।”—हितोपदेश १४:१०.
५: आफैलाई हानि पुऱ्‍याउने बानीबाट अलग रहनुहोस्‌
कोही-कोही शोकित व्यक्‍तिहरू आफ्नो पीडा कम गर्न रक्सी वा लागू पदार्थको सहारा लिन्छन्‌। यस्तो उपायले आफैलाई हानि पुऱ्‍याउँछ। यस्तो कुराले क्षणिक समयको लागि मात्र पीडा कम गर्छ तर त्यसको असर डरलाग्दो हुन्छ। चिन्ता-फिक्री हटाउन हानि नपुऱ्‍याउने तरिकाहरू खोज्नुहोस्‌।
सिद्धान्त: “तन र मनलाई अशुद्ध पार्ने हरकिसिमका कुराबाट अलग रहेर आफूलाई शुद्ध पारौँ।”—२ कोरिन्थी ७:१.
६: समय छुट्ट्याउनुहोस्‌
शोकबाट (भावनात्मक पीडाबाट) ध्यान अन्तै मोड्‌न थुप्रैले विभिन्‍न क्रियाकलापमा (केही समयको लागि पीडा कम गर्न मदत गर्ने गतिविधिमा) व्यस्त हुनु मदतकारी पाएका छन्‌।
मित्रता गाँस्दा वा बढाउँदा, नयाँ सीप सिक्दा वा कुनै रमाइलो गतिविधिमा समय बिताउँदा केही हदसम्म पीडा कम भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
समय बित्दै जाँदा तपाईँ सन्तुलित हुन सक्नुहुनेछ। आफ्नो पीडा कम हुँदै गएको अनि आफू सम्हालिएको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। यो मनको घाउ निको हुने प्रकिया हो।
सिद्धान्त: “सबै कामको लागि उचित समय छ, . . . रुने एउटा समय छ, हाँस्ने एउटा समय; शोक गर्ने एउटा समय छ, नाच्ने एउटा समय।”—उपदेशक ३:१, ४.
७: तालिकाअनुसार चल्नुहोस्‌
आफ्नो नियमित तालिकाअनुसार चल्न कदम चालिहाल्नुहोस्‌।
सुत्ने, काम गर्ने र अन्य क्रियाकलाप गर्ने राम्रो तालिका छ भने सामान्य दिनचर्यामा फर्किन सजिलो हुनेछ।
असल काममा व्यस्त हुँदा आफ्नो पीडा कम गर्न सक्नुहुन्छ।
सिद्धान्त: “साँचो परमेश्‍वरले उसको हृदय आनन्दले भरिदिनुभएकोले उसलाई आफ्ना दिनहरू बितेको पत्तै हुँदैन।”—उपदेशक ५:२०.
८: महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न हतार नगर्नुहोस्‌
प्रियजन गुमाउनेबित्तिकै हतारमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका कोही-कोही पछि पछुताउनुपरेको छ।
सक्नुहुन्छ भने घर सर्नुअघि, जागिर परिवर्तन गर्नुअघि वा मृतकको सामान मिल्काउनुअघि केही समय कुर्नुहोस्‌।
सिद्धान्त: “मेहनती मानिसले बनाएको योजना सफल हुन्छ तर हतार गर्ने मानिसहरू कङ्‌गाल हुन्छन्‌।”—हितोपदेश २१:५.
९: आफ्नो प्रियजनलाई सम्झनुहोस्‌
शोकित व्यक्‍तिहरूले आफ्नो प्रियजनको याद ताजा राख्न विभिन्‍न कदम चाल्नु फाइदाजनक भएको महसुस गर्छन्‌।
फोटोहरू र तिनको सम्झना गराउने कुराहरू सङ्‌कलन गर्दा वा तिनीबारे र आफूले सम्झन चाहेको कुनै घटनाबारे डायरी लेख्दा सान्त्वना पाउन सक्नुहुन्छ।
आफूले गुमाएको प्रियजनको मीठो सम्झना दिने सामानहरू सुरक्षित राख्नुहोस्‌ र आफू सम्हालिएपछि ती कुराहरू हेर्नुहोस्‌।
सिद्धान्त: “उहिले-उहिलेका दिनहरू सम्झ।”—व्यवस्था ३२:७.
१०: घुम्न जानुहोस्‌
घुम्न जाने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ।
लामो छुट्टी लिन सक्नुहुन्‍न भने एक-दुई दिनको लागि भए पनि रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै: पैदल यात्रा गर्ने, सङ्‌ग्रहालय भ्रमण गर्ने वा कतै घुम्न जाने।
तपाईँले आफ्नो दिनचर्यामा केही फेरबदल गर्नुभयो भने शोक कम गर्न मदत पाउन सक्नुहुन्छ।
सिद्धान्त: “तिमीहरू पनि मसँगै एकान्तमा आओ र केहीबेर आराम गर।”—मर्कुस ६:३१.
११: अरूलाई मदत गर्नुहोस्‌
नबिर्सनुहोस्‌, अरूलाई मदत गर्दा तपाईँले आफ्नो पीडा कम भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँको प्रियजनको मृत्युले असर पारेकाहरूलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै: तपाईँको साथी वा नातेदारलाई, जसलाई आफ्नो दुःख र भावना बुझ्ने साथी चाहिएको हुन सक्छ।
अरूलाई सान्त्वना दिन र मदत गर्न अघि सर्दा आनन्दित हुन सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवन अझै पनि उद्देश्‍यपूर्ण छ भनेर अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
सिद्धान्त: “लिनुमा भन्दा दिनुमा धेरै आनन्द छ।”—प्रेषित २०:३५.
१२: आफ्नो प्राथमिकताबारे पुनःविचार गर्नुहोस्‌
शोकमा परेपछि तपाईँको जीवनमा कुन कुरा महत्त्वपूर्ण छ भनी बुझ्नुहुनेछ।
यस अवस्थालाई आफ्नो जीवनशैली केलाउने मौकाको रूपमा लिनुहोस्‌।
आवश्‍यकताअनुसार आफ्नो प्राथमिकता छाँटकाँट गर्नुहोस्‌।
सिद्धान्त: “भोजको घरमा जानुभन्दा शोक परेको घरमा जानु बेस हो किनकि मृत्यु नै सबै मानिसको अन्त हो। जिउँदाहरूले यो कुरा मनमा राख्नुपर्छ।”—उपदेशक ७:२.
शोकको सामना गर्नुहोस्‌ | सारांश
स्वस्थकर खानेकुरा खानुहोस्‌, प्रशस्त पानी पिउनुहोस्‌ र हल्का व्यायाम गर्नुहोस्‌।
शोक परेको बेला थकान हटाउन सुत्नु आवश्‍यक छ भन्‍ने कुरा मनमा राख्नुहोस्‌।
सबैको शोक गर्ने तरिका फरक हुन्छ, त्यसैले के गर्दा तपाईँको पीडा कम हुन्छ, पत्ता लगाउनुहोस्‌।
रक्सीको दुरुपयोग र लागू पदार्थको सेवन गर्नदेखि अलग बस्नुहोस्‌। यसले समस्या सुल्झाउनको साटो समस्यामाथि समस्या थपिदिन्छ।
शोकबाट ध्यान अन्तै मोड्‌न साथीभाइसित सरसङ्‌गत र रमाइलो गर्नुहोस्‌।
सामान्य दिनचर्यामा फर्किन राम्रो तालिका बनाउनुहोस्‌ र त्यसैअनुरूप चल्नुहोस्‌।
सकिन्छ भने एक वर्ष वा अझ बढी समय बितेपछि मात्र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुहोस्‌ ताकि तपाईँले पछुताउनु नपरोस्‌।
आफूले गुमाएको प्रियजनको याद ताजा राख्न फोटोहरू र तिनको सम्झना गराउने कुराहरू सङ्‌कलन गर्नुहोस्‌ वा डायरी लेख्नुहोस्‌।
आफ्नो दिनचर्यामा केही फेरबदल गर्नुहोस्‌। एक दिन वा छोटो समयको लागि भए पनि आफ्नो तालिकामा छाँटकाँट गर्नुहोस्‌।
खाँचोमा परेकोलाई मदत गर्न अघि सर्नुहोस्‌। तपाईँको प्रियजनको मृत्युले असर पारेको साथी वा नातेदारलाई मदत गर्नुहोस्‌।
यस अवस्थालाई आफ्नो प्राथमिकताबारे पुनःविचार गर्ने मौकाको रूपमा लिनुहोस्‌ अनि त्यसैअनुसार छाँटकाँट गर्नुहोस्‌।
वास्तवमा कुनै पनि कुराले हाम्रो पीडा पूर्ण रूपमा निको पार्न सक्दैन। प्रियजन गुमाएका थुप्रैले आवश्‍यक कदम चाल्दा पीडा कम गर्न सकिन्छ भनेर अनुभव गरेका छन्‌। तिनीहरूले यस लेखमा उल्लिखित सल्लाहहरू पालन गर्दा सान्त्वना पाउन सक्छन्‌। हुनत शोक कम गर्ने तरिका यति मात्र होइन। तैपनि यी सल्लाहहरू पालन गर्दा पीडा कम भएको पक्कै महसुस गर्नुहुनेछ।
^ अनु. 13 ब्यूँझनुहोस्‌! पत्रिकाले कुनै खास उपचारको सिफारिस गर्दैन।
प्रियजनको मृत्यु हुँदा
शोकको सामना गर्न मदत गर्ने केही व्यावहारिक तरिका थाह पाउनुहोस्‌।
शोकमा परेकाहरूका लागि साँचो मदत
बाइबलले शोकमा परेकाहरूका लागि साँचो मदत दिन्छ।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने शोकको सामना गर्नुहोस्‌—तपाईँले चाल्नुपर्ने कदम
शोकमा पर्दाको पीडा
कस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ?
यस अङ्‌कमा: शोकमा परेकाहरूका लागि मदत
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प ब्यूँझनुहोस्! शोकमा परेकाहरूका लागि मदत
शेयर गर्ने शेयर गर्ने ब्यूँझनुहोस्! शोकमा परेकाहरूका लागि मदत
ब्यूँझनुहोस्! शोकमा परेकाहरूका लागि मदत
म यो चोट कसरी सहन सक्छु?
समस्याहरूसँग जुझ्न मदत गर्छ